Igbu oge ire Airpods, MacBook Pro ọhụrụ, Apple Pay na Spain na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
Igbu oge ire Airpods, MacBook Pro ọhụrụ, Apple Pay na Spain na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Mgbe isi ụlọ ọrụ Cupertino na-aga n'ihu na-edozi ma na-ehicha ụlọ ezumezu na ọfịs mgbe nnọkọ ahụ gasịrị na Tọzdee, na Soy de Mac anyị na-aga n'ihu ịnakọta ozi dị mkpa banyere akụrụngwa ọhụrụ ahụ n'ụzọ dị jụụ. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ izu nke ọhụrụ MacBook Pro Retina, ma na mgbakwunye na isi okwu a na-adọrọ mmasị nke na-echeta ncheta afọ 25 nke laptọọpụ mbụ nke Apple anyị ahụwo ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị. Maka nke a, anyị nwere ọmarịcha ụbọchị a na Sọnde ikpeazụ nke Ọktọba, yabụ nọdụ ala, ka anyị zuru ike ma nwee ọmarịcha akụkọ kachasị n'izu a.
Ya mere, ka anyị gbadaa azụ ahịa ma lelee ụfọdụ ozi na-atọ ụtọ anyị hụrụ na izu gara aga nke Ọktọba, na-ahapụ akụkọ kachasị ọhụrụ banyere MacBook Pro Retina ọhụrụ. Nke mbụ a metụtara Apple Pay na nso nso ya malite na Spain. Tim Cook n'onwe ya kọwara na ọrụ ịkwụ ụgwọ a site na NFC na Mac, ga-adị na ọnwa ndị na-abịanụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu, ọ dị mma imelite na macOS Sierra 10.12.1, o doro anya na ndị ọrụ ahụ enweghị ike ịme ya kwa igwe ma nọrọ na OS X El Capitan ga-enwerịrị ndị kasị dịrị nchebe version kwere omume na ọ bụ ya mere Apple ka ulo oru a nche melite maka ha.
Ọzọ nke pụtara ìhè nke a izu bụ doro anya na igbu oge na ịmalite Airpods. Igweisi ekweisi ikuku ndị a ata ahụhụ oge na mbupụta ha gaa ahịa na nke a emerụla ndị niile na-echere ime ịzụta ha aka. Ọ ga-abụ oge iji nwekwuo ndidi.
N'ikpeazụ, anyị chọrọ igosi na awa ole na ole tupu isi okwu na Tọzdee, Ọktọba 27, Apple bipụtara ya Nsonaazụ ego maka nkeji iri na ise a na ndị a adịghị njọ, mana ha adịghị mma dịka ndị gara aga na ahịa nke iPhones, iPads na Macs ... Nke a bụ ihe na ọ ga-efu ụlọ ọrụ ahụ iji weghachite ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na nke ahụ bụ ihe ọ dị ka ruo mgbe mbata nke ọhụrụ iPhone 8 na o yiri ka a ga-ọma natara site ọrụ, ihe niile ga-hụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Ṅaa » Igbu oge ire Airpods, MacBook Pro ọhụrụ, Apple Pay na Spain na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Apple weputara tvOS 11.2 ohuru na watchOS 4.2 betas maka ndi mmepe
Lacie weputara draịvụ ike Thunderbolt 3 ọhụrụ ya maka MacBook Pro